आफूलाई ‘बेवकुफ’ भन्दै जिस्काएपछि विवाह गरेको तीन मिनेटमै डिभोर्स ! – MeroOnline Khabar
एजेन्सी । कुवेतमा एउटा जोडी विवाह गरेको तीन मिनेटमै छुट्टिएको छ ।
यो विवाह कुवेतको इतिहासमा नै सबैभन्दा कम समयको भएको बताइएको छ । डेली मेलका अनुसार अदालतमा विवाहको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर निक्लनेबित्तिकै बेहुलीले डिभोर्स गरेकी हुन् ।
← अदालतले गर्‍यो भोलि देशभर बन्द [विज्ञप्तिसहित]
जेठाजुले यी ३ कारणले भाईको श्रीमती मारे ! बाहिरियो हत्या हुनु भन्दा १० मिनेट अगाडी भनेको यस्तो कुरा →